Meesha la aado bisha Maajo: 10 meelaha ugu wanaagsan adduunka oo dhan | Wararka Safarka
Luis Martinez | 18/05/2021 10:25 | Meelaha Dalxiiska loo tago, Guides
Waxaan dooneynaa inaan kuugu sheegno maqaalkan meesha lagu safrayo bisha May: tobanka meelood ee ugu sareeya. Sababta waa mid aad u fudud: guga wuxuu keenaa cimilo wanaagsan, maalmuhu way sii dheereeyaan heerkulkuna wuxuu bilaabaa inuu kaco. Sida in waxaas oo dhammi aysan ku filnayn, xilli-roobaadkii weli ma degin Aasiya jiilaalkiina wali kama uusan muuqan Koonfurta Ameerika.
Waxaas oo dhan ayaa sameeya safarka bisha May waa fikrad aad u fiican. Intaas waxaa sii dheer, hudheeladu sida caadiga ah way ka jaban yihiin xagaaga oo meelo badan baa lagu xusaa fiestas aad u xiiso badan. Haddii waxaas oo dhan aad ku darto in meelaha dalxiisyadu ay ka yar yihiin dadku marka loo eego bilaha Luulyo ama Ogosto, waxaad leedahay sababo badan oo wanaagsan oo aad uga fikirto meesha aad u safreyso bisha Maajo. Waxaan ku tusi doonaa toban ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee aad ku dhaqaaqi karto.
1 Meesha la aado bisha Maajo: 10 meelaha ugu wanaagsan, laga bilaabo koonfurta Spain ilaa xeebaha Filibiin
1.1 Prague, waa meel muusig ah oo loo safro bisha May
1.2 Porto: meesha loo safro bisha May haddii aad raadineyso wax ka duwan
1.3 Normandy, oo ah dhul aad u qurux badan
1.4 Seville, oo ah raaxo aad u dhow
1.5 New York had iyo jeer waa sharad fiican
1.6 Qubrus, oo ah jawharad ku taal badda Mediterranean
1.7 La Palma, safar ka duwan kan Jasiiradaha Canary
1.8 Bantayan, xasilloonida jasiiradda Filibiin
1.9 Córdoba, soo jiidashada Magaalada Caliphal
1.10 Costa Rica, oo ah dhul beeraha dabiiciga ah
Meesha la aado bisha Maajo: 10 meelaha ugu wanaagsan, laga bilaabo koonfurta Spain ilaa xeebaha Filibiin
Meelaha aan kuu soo bandhigi doono waxaa ka mid ah muuqaallo riyooyin u eg, xeebo aan la barbardhigi karin, taallo fara badan iyo xaflado dhaqameed caan ku ah caalamka. Waxaan bilaabeynaa socdaalkeena meelaha aan u safreyno bisha May.
Prague, waa meel muusig ah oo loo safro bisha May
Qasriga Prague iyo Cathedral
Magaalo madaxda gobolka Czech ee Bohemia Waa goobta ugu horreysa ee aan kugula talineyno. Sida haddii dhaxalka weyn ee weyn ay ahayd sabab yar, laga soo bilaabo bartamihii bishii Meey illaa horraantii Juun ayay u dabaaldegtaa Bandhig Faneedka Caalamiga ah ee Guga. Orkestaraal waaweeyn iyo kiristaan ​​ayaa ku kulmaya magaalada si ay u qabtaan riwaayado lama ilaawaan ah.
Sidaa darteed, haddii aad jeceshahay muusig, waxaan kuu soo jeedinaynaa safar aad ku tagto Prague si aad ugu raaxaysato dhacdadan. Iyo, habka, ha u joojin booqashada degmooyinka Castle iyo Mala Strana, halkaas oo aad ku arki doontid dhismayaal qurux badan sida Prague Castle lafteeda, the St. Vitus Katidral ama kuwa qaaliga ah Buundada Charles. Sidoo kale, ha ilaawin inaad dhex marto Staré Mesto, magaalada dhexe ee aad ka heli doonto Hoolka Magaalada leh saacaddeeda xiddigiska caanka ah.
Porto: meesha loo safro bisha May haddii aad raadineyso wax ka duwan
Porto, waa meel ku habboon oo loo safro bisha May
Malaha magaalada ugu quruxda badan Portugal waa Lisboa iyo xeebaha ugu fiican dalka ayaa ku jira Algarve. Si kastaba ha noqotee, Porto sidoo kale waxay leedahay waxyaabo badan oo ay kuu soo bandhigto. Kuwa bilowga ah, magaaladeedii hore ayaa lagu dhawaaqay Dhaxalka aduunka dhismayaasha sida cathedral-keeda, daaraheeda Stock Exchange, kaniisada iyo munaarada Clérigos ama buundooyinkeeda badan ee kuyaala wabiga Duero.
Laakiin, marka lagu daro, waxaad ku raaxeysan kartaa dabaqyada nool ee Ribeira, Halkaas oo ay kuugu deeqi doonaan keega caanka ah iyo khamriga Dekedda ee aan aadka loo aqoon. In kasta oo, haddii aad rabto inaad ogaato habka sameynta kan dambe, waxaad leedahay khamri fara badan oo ku yaal dhinaca kale ee Duero.
Ugu dambeyntiina, ha joojin booqashadaada matxafyada magaalada Boortaqiiska. Waxaan kugula talineynaa adiga Dhexdhexaad, taas oo ku taal Casa del Infante, oo ku taariikhaysan qarnigii saddex iyo tobnaad; mid ka mid ah Gawaarida korontada, oo wata gawaaridiisii ​​hore, iyo Soares waxay sameeyaan Reis National, taas oo muujinaysa qayb weyn oo ka mid ah shaqada farshaxan-yahan kaas oo u bixinaya magaceeda, mid ka mid ah kuwa ugu caansan taariikhda Boortaqiiska.
Normandy, oo ah dhul aad u qurux badan
Waxay ku taal waqooyiga Francia, Normandy waa quruxsan yahay waqtigaan. Haddii aad booqato, waxaad ka heli doontaa buuro qurux badan sida kuwa Étretat, laakiin sidoo kale xeebaha duurjoogta ah oo iska indhatiraya Kanaalka Ingiriiska iyo muuqaallo kale oo qurux badan.
Waxa kale oo aad arki kartaa magaalooyin taariikhi ah sida Ruan, halka lagu gubay Joan of Arc iyo in ay leedahay taallo sida Cathedral of Our Lady, jawharad in qaabka Gothic; Abbey-ka cajiibka ah ee Saint-Ouen iyo Kaniisadda Saint-Maclou, laba tusaale oo Flamboyant Gothic ah, iyo dhismaha quruxda badan ee Hotel de Bourgtheroulde, oo loo beddelayo qaabka Renaissance.
Booqasho kale oo aadan ka maqnaan karin Normandy waa Le Havre, oo xarunteeda taariikhiga ahi tahay Dhaxalka aduunka dhismaheeda gaarka ah ee loo yaqaan 'Renaissance cathedral', munaaradda laambadda ee kaniisadda Saint-Joseph iyo dhismayaal kale.
Laakiin wixii intaas ka sareeya, kama bixi kartid Normandy adigoon booqan jasiiradda Mont Saint-Michel, Kaas oo ka tagaya xaaladdeeda aan caadiga ahayn marka baddu kacdo iyo halka ay ku taal meesha weyn ee Benedictine abbey oo isku magac ah, kaas oo isku daraya qaababka Carolingian, Romanesque iyo Gothic
Seville, oo ah raaxo aad u dhow
Plaza de España oo ku taal Seville
Sidoo kale uma baahnid inaad ka tagto Spain si aad u doorato halka aad u safreyso bisha May. Magaalada caasimada ah ee Andalus waa magaalo aad u wanaagsan oo lagu raaxeysto guga. Magaalada Seville waxaad ku leedahay taallo qurux badan sida quruxdeeda Kaniisad iyada oo aan ka yareyn saariddeeda Giralda; ah munaaraddii Dahabka ama Real Alcazar, jawharad isku dhafan qaababka Gothic iyo Mudejar.
Casri ah, laakiin aan yareyn wacdaro ayaa ah Fagaaraha Spain, waxaa loo dhisay Expopos-kii loo yaqaan 'Ibero-American Exposition' ee sanadkii 1929-kii kaas oo aad ula dhacsan cabirkiisa iyo qaabkiisa Sidoo kale, ha iloobin inaad ku dhex lugeyso xaafadaheeda quruxda badan sida Triana ama taas Santa Cruz iyo tan qaaliga ah Maria Luisa park.
Laakiin, marka lagu daro, Seville waxay leedahay soojiidasho kale waqtigan. Bilowgii Maajo caankiisa cadaalad ah, nalalka dhaqameed iyo meesha aad ugu raaxeysan karto khamriga iyo muusikada dalka.
New York had iyo jeer waa sharad fiican
Waxaan bedeleynaa waddamada iyo xitaa qaaradaha si aan kuugu casuumo inaad booqato New York, oo ah safar safar oo aan waligiis dhicin. Waqti kastaa waa wakhti fiican oo loo aado "magaalada daaraha dhaadheer." Dhexdeeda, waxaad ku bilaabi kartaa safarkaaga Times Square, fagaaraha caanka ah ee shaashadaha waaweyn. Kadib waad booqan kartaa xaafadooda, badanaa Brooklin o Harlem, oo soco dhexe Park ama arag bandhig Broadway.
Laakiin waxa aanad joojin karin samaynta waa aragtaa Aqoonsiga Liberty, ka jasiiradda ellis, halkaas oo muwaadiniin ka kala yimid daafaha dunida ay ka yimaadeen raadinta riyada Mareykanka oo ah taallo tahriibka, iyo matxafyada sida Magaala-weynta Farshaxanka, mid ka mid ah noocyada ugu waaweyn uguna muhiimsan adduunka.
Qubrus, oo ah jawharad ku taal badda Mediterranean
Dabeecad aad uga duwan tii hore ayaa leh meesha loo socdo ee aan hadda ku talinayno. Qubrus waa isku-dhafnaan kaamil ah xeebaha quruxda badan iyo muuqaalka muuqaalka leh hiddaha taariikhiga ah ee aan lala tartamin. Marka hore, waxaan ku talinaynaa Nissi y Makronissos, halkaas oo aad sidoo kale ku tababaran karto quusitaanka biyaha.
Sida dhaxalka, Qubrus waxaad ka heli doontaa monasteryo qurux badan oo kaniisadaha ah sida tan Saint Irakleidios iyo qalcado qarniyadii dhexe sida tan oo kale Kolossi, oo ay dhisteen jilicsanaanta Amarka San Juan, ee ku xiga iglesias sida kuwa Troodos massif, loo aqoonsan yahay sida Dhaxalka aduunka.
Dhinaca kale, caasimada dalka, NicosiaWaxaad leedahay matxaf qurux badan oo aad ka sahamin karto dhammaan taariikhda jasiiradda laga soo bilaabo Neolithic illaa waqtigii Cusmaaniyiinta. Laakiin intaadan arkin ka derbiga dhexe oo ay dhisteen reer Venetia, oo ku hareeraysan magaaladii hore oo laga soo galo albaabada sida Famagusta.
La Palma, safar ka duwan kan Jasiiradaha Canary
Roque de los Muchachos, oo ku taal La Palma
Si aan uga jawaabno su'aasha ah halka loo safro Maajo, waxaan soo jeedinaynaa jasiirad kale oo ka hooseysa. Waxaan kaala hadli doonaa La Palma, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu caansan Jasiiradaha Canary, laakiin ay ka buuxaan muuqaal qurxoon, xeebo riyadeed iyo magaalooyin caadi ah.
Loo yaqaanay "jasiiradda quruxda badan"Haddii aad booqato, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxeysato meelaha bacaadka leh sida kuwa Dekedda Naos, Godka cagaaran o Los Cancajos. Laakiin sidoo kale kaymaha dhaadheer ee laurel iyo fulkaano aad u qurux badan sida kuwa Waxaan lahaa hage ama Caldera de Taburiente, agagaarkiisa oo la abuuray beero qaran oo dhan.
Ugu dambeyntii, gudaha Santa Cruz de la Palma, caasimada jasiiradda, waxaad leedahay taallooyin sida kaniisadaha San Francisco iyo Santo Domingo, xoog sida Qalcadda Santa Catalina iyo guryo sharaf leh oo isaga la mid ah Qasriga Sotomayor ama Guriga weyn ee Salazar.
Bantayan, xasilloonida jasiiradda Filibiin
Xeebta Sonkorta, ee Bantayan
Aasiya had iyo jeer waa ikhtiyaar xiiso leh oo lagu noolaado fasax wanaagsan, wadamada ugu booqashada badan qaaradan Waxay hoy u yihiin meelo cajaa'ib leh, laakiin haddii aad hubto in halkaad u safreyso bisha Maajo inay leedahay xeeb, tixgeli inaad u baxsato jasiiradda Filibiin ee Bantayan. Xeebaha riyadeeda waxaa ka mid ah, kota, oo carrabkiisa ciid ah; Sonkorta; tii Jannada ama xitaa ka sii qallafsan oo aad ka heli karto jasiirad bikro ah, oo aad ku heli karto adoo kireysanaya mid ka mid ah doomaha yar yar ee maxalliga ah, oo la yiraahdo bangka.
Runtii wax kale oo badan kuma lihid Bantayan. Marka laga reebo meelaha bacaadka ah ee aan soo sheegnay, waad lugeyn kartaa Omagieca Obo-Ob Mangrove Ecopark, meel dabiici ah oo mangroves aad u wanaagsan. Si kastaba xaalku ha ahaadee, meelaha loo safro bisha May dhexdeeda, tani waa mid ka mid ah kuwa leh xeebo fiican iyo xasillooni badan.
Córdoba, soo jiidashada Magaalada Caliphal
Had iyo jeer waa wakhti wanaagsan oo la booqdo magaalada Andorusiya ee Córdoba. Maaha wax aan micno lahayn, waa mid ka mid ah kuwa leh tiirarka ugu caansan Dhaxalka Aduunka adduunka oo dhan. Ku dhowaad wax aan loo baahnayn ayaa ah inaan kuu sheegi doonno quruxdeeda Myar, oo hadda ah Cathedral of Assumption of Our Lady; ee dhaxalka Roman; rubuckeedii hore ee Yuhuudda halkaasoo aad weli booqan karto Guriga Sepharad iyo sunagogga; ee ah maydhashada caliphal ama ku soo rogaya Alcazar ee Boqortooyadii Masiixiyiinta.
Sidoo kale, bannaanka magaalada waxaad ku leedahay kakoobnaan Madiina Azahara, mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya, oo ku xigta Alhambra ee Granada, dhismaha muslimiinta ee Isbaanishka. Laakiin waa taas, marka lagu daro, inta lagu jiro bisha Maajo Córdoba ayaa u dabaaldegta Xisbiga Patios-ka, ayaa lagu dhawaaqay Dhaxalka aan la taaban karin ee Aadanaha, iyo waliba kan May iskutallaabta Festival.
Costa Rica, oo ah dhul beeraha dabiiciga ah
Irazú Volcano, gudaha Costa Rica
Waxaan gabi ahaanba badalnay nuuca loo socdo si aan udhameysano liiskayaga meesha aan u safrayno bisha May. Costa Rica waxay u taagan tahay dabeecaddeeda xiisaha leh. Waxaad ku haysataa caddeyn wanaagsan tan shabakada baarkinka qaranka, qaar buuro leh iyo kuwo kale oo ku yaal bartamaha dhul xeebeedka.
Ku saabsan tii hore, waxaan kugula talineynaa inaad aragto midka fulkaanaha Arenal o midka Irazú, halka, sida ilbiriqsiyadu, ay yihiin kaahuhu, oo leh reef reral iyo kaymaha kulaylaha ee qoyan; midka Barra Honda, oo leh godadkeeda, ama Carara, oo leh geedaheeda hooyo.
Qaybta dambe waxay u jirtaa boqol kilomitir San José, caasimada dalka. Dhexdeeda, waxaad sidoo kale ku arki kartaa dhismayaasha neoclassical sumptuous sida Qasriga Moorida, Boostada iyo Telegraph ama tii Tiyaatarka Qarankaiyo sidoo kale Katidralka Metropolitan iyo kaniisadaha ee naxariista, ee kalinimo iyo Carmen. Haddii aad rabto inaad ogaato meelaha kale ee Costa Rica, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad akhriso maqaalkan.
Gabagabadii, hadaad isweydiineysay halka laga safrayo may, waxaan ku tusnay toban meelood oo udhaxeysa waqtigaas. Hada xulashadu adiga ayey kujirtaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Meelaha Dalxiiska loo tago » Meesha la aado bisha Maajo: 10 meelaha ugu wanaagsan